Sida loo kormeerayo, Phone Cell farriimaha qoraalka For Free
Haddii aad raadinaysid sida ugu wanaagsan si ay ula socdaan telefoonka gacanta ee ilmahaaga, xaaskiisa, ninkaaga, shaqaale, saaxiibtiis qish, saaxiib ama xaaskaaga, Annagu waxaan imtixaannay iyo dib u eegis qaar ka mid ah adeegyada la socodka telefoonka lacag la'aanta ah ugu sareeya.
Qaar ka mid ah kuwan Chine phone tracking ama barnaamijyadu waa lacag la'aan iyo qaar ka mid ah kharash lacag bishii. Muuqaaladan ugu doonayay ee telefoonka gacanta raadraaca ayaa jira si ay u awoodaan inay akhriyaan fariimaha dadka SMS text aan qofka kale og. Haddii ilmahaagu uu ahaa mid dhibaato gala ama aad ka shakiyaan ee xaaskaaga oo qish, markaas trackers kuwaas hawl telefoonka gacanta run ahaantii kaa caawini karaan in aad fahamto xaaladda. Kuwani noocyada kala duwan ee barnaamijyada jaridda meesha telefoonka gacanta waxaa caadi ahaan si qarsoodi ah lagu rakibay dadka ka iPhone ama Android phone. Markaas waxaa dhacda in login doonaa in website ku computer desktop ah. Marka oggollaan inaad ee ku garaaci doona info ee looga baahan yahay in ay ku xidhmaan telefoonka aad ku rakiban app ee ku saabsan. Waxaad markaas awood u yeelan doonaan in ay arkaan in dadka goobta in waqtiga dhabta ah, akhri dhammaan fariimaha qoraalka SMS ay aqoon la'aan (inbound iyo gudoohood) iyo arko telefoonada log dhamaystiran call taariikhda (inbound iyo gudoohood).
ExactSp-SMS Tracker ee Android FREE iyo BEST app Android kuu sheegi doonaa meesha fog laga dabagal iyo kormeer ku SMS, MMS, fariimaha qoraalka, wicitaanada, iyo meesha telefoonka GPS. Tani app socodka qoraalka waa in si qoto dheer hab-socod oo iyo la socodka ugu fog ee Android dadka isticmaala telefoonka. Kaliya in aad rakibto Tracker SMS ku telefoonka aad doonayso in aad kormeer ku. Waxaad markaas meesha fog laga akhrisan kartaa dhammaan fariimaha SMS Text (inbound iyo gudoohood), Farriimaha MMS multimedia, dhammaan photos soo diray iyo heshay, aragto diiwaankaas telefoon qof (oo ay ku jiraan magaca qof, lambarka telefoonka, Oo ilaa goormay hadlay qofkaasi) oo waxay u arkaan dhamaystiran taariikhda dhirta web fog. Waxaad kaloo ka eegi kartaa macluumaadka goobta dadka diirada GPS khariiradda si aad u aragto sida saxda ah meesha ay joogaan iyo waqtiga. Qofka ama beegsadaan aad raad ma noqon doonto ka war aad halkaas u dhaqaaqo kasta, call kasta oo qoraal kasta. All of macluumaadkan waxaa laga daawan karaa fog on browser internet oo ay ku jiraan phone, kaniini ama PC. Waalidiinta hadda ku yeelan karaan aalad awood leh oo lacag la'aan ah si ay u caawiyaan caruurta ku badbaadin kartid xataa markii aan iyaga la.
La socodka phone software cell Free
Sida loo kormeerayo, Phone Cell farriimaha qoraalka For Free – Tilmaamaha of exactspy
Waxaad Download karaa: Sida loo kormeerayo, Phone Cell farriimaha qoraalka For Free ?
Basaas telefoonka gacanta ee iPhone 4 free, La socodka phone software cell Free, App Free basaas mobile for iphone, Software Free basaas gacanta u iphone, Sida loo kormeerayo, Phone Cell farriimaha qoraalka For Free, Spyware ee taleefannada gacanta